Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) - Hello Sayarwon
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ )
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ကဘာလဲ။
စအိုပြည်တည်နာသည် စအိုရှိ အကြိတ်ဂလင်းများ၌ ရောဂါပိုး ကူစက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ စအိုဝန်းကျင်၌ ပြည်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စအို၀ ဝန်းကျင်၌ အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ မမြင်သာသော စအို၏ အတွင်းပိုင်း တစ်ရှုးများ တွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စအိုပြည်တည်နာကို ထိန်းချုပ် ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။ အခြား အချက်အလက်များ ထပ်မံ သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စအိုပြည်တည်နာ၏ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာသည် စအို၌ စူးရှစွာ နာကျင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် (အထူးသဖြင့် ထိုင်နေချိန်)။ အခြားလက္ခဏာများမှာ စအို၌ ယားယံခြင်း၊ ပြည်ယိုခြင်း နှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တည်နာသည် စအိုအတွင်းပိုင်း၌ ရှိနေလျှင် နုန်းချိခြင်း နှင့် ချမ်းတုန်၍ ဖျားခြင်းများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖျားနာခြင်း တစ်ခုတည်းကိုသာ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
အထက်၌ မဖော်ပြခဲ့သော ရောဂါလက္ခဏာအချို့လည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခု ရှိနေသည်ဟု ထင်ပါလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
အထက်၌ ဖော်ပြခဲ့သော ရောဂါလက္ခဏာများ ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်၏ ကိုယ်ခန္ဓါသည် တုံ့ပြန်မှုခြင်း မတူညီကြပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်ရောဂါအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စအိုပြည်တယ်နာကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းများမှာ စအိုနှင့်ဆက်ထားသော လမ်းကြောင်းငယ်လေးများ၌ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်း၊ စအိုရှိ အကြိတ်ဂလင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် လိင်အင်္ဂါမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးကူးဆက်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင်၌ အောက်ပါအချက်များ ရှိနေလျှင် စအိုပြည်တယ်နာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။
Corticosteroid ဆေးများ သုံးစွဲနေသူများနှင့် chemotherapy ခံယူနေသူများ၌လည်း စအိုပြည်တယ်နာ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသည်။
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
များသောအားဖြင့် စအိုတွင်းသို့ လက်ဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု လပ်ရုံဖြင့် စအိုပြည်တယ်နာကို သိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် စအိုကင်ဆာ၊ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးဆက်သော ရောဂါများနှင့် အခြားရောဂါများ ရှိမရှိ သိရှိရန် ဆက်လက်၍ စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
Anal Abscess (စအိုပြည်တည်နာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စအိုပြည်တယ်နာသည် ပြည်များပေါက်၍ ထွက်မလာခင် ကုသလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ထုံဆေးသုံး၍ ခွဲစိပ်ကာ ပြည်များကို ဖောက်ထုတ်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်ဆိုးရွားလျှင် ဆေးရုံတက်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ပြည်များကို ဖောက်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီးလျှင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် ပဋိဇီဝဆေးများ သောက်ရပါသည်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ် အတွင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်များစွာကြာမှ ဖြစ်စေ စအိုတွင်း၌ လမ်းကြောင်းပေါက်လေးများ ဖြစ်ပေါ်လာ တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလမ်းကြောင်းပေါက်လေးများ အတွက် နောက်ပိုင်းတွင် ခွဲစိပ်ကုသမှု သပ်သပ် ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် စအိုပြည်တယ်နာ ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
သင့်လျော်သော ကုသမှုနှင့် ဂရုစိုက်နေထိုင်မှုများ ရှိလျှင် စအိုပြည်တယ်နာသည် အချိန်တိုအတွင်း လုံး၀ ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါသည်။ စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံချိန်၌ condom သုံးခြင်းဖြင့်လည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ မွေးကင်းစကလေးများ နှင့် လမ်းလျှောက်တတ်စအရွယ် ကလေးများတွင် diaper မကြာခဏ လဲပေးတတ်ရ၍ လဲစဉ်၌ စအိုကို သန့်ရှင်းပေးစေခြင်းဖြင့် စအိုဝအက်ကွဲခြင်း နှင့် စအိုပြည်တယ်နာ နှစ်မျိုးလုံးကို ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါသည်။
Anal abscess. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/anal-abscess Assessed September 3, 2016
Anorectal abscess. https://medlineplus.gov/ency/article/001519.htm Assessed September 3, 2016